श्रीमति भाँडा माझेर छोराछोरी पढाउने, श्रीमान् बिदेशमा अर्कै केटीसँग र‘माउने (भिडियो हेर्नुहोस्) – NepalajaMedia
March 14, 2021 137
बिहे भएको २५ बर्ष भयो । श्रीमान् बिदेशमा छन् । श्रीमति नेपालमा भाँडा माझेर छोरो पढाइ रहेकी छिन् । तर कुवेतमा भएका पतिले एक् रुपैयाँ घरमा सहयोग गरेका छैनन् । उल्टै केटी लिएर बसेको भन्ने सुनिन्छ ।यस्तो खालको समस्या लिएर गोरखाकी शान्ता थापा यतिबेला रुँदै मिडियामा आएकी छिन् ।
उनी भन्छिन्, पति कुवेत गएको ६ बर्ष भयो, छोरो नै १२ बर्ष भै सक्यो । उनका पति राजेन्द्र बाबु थापा मगर फोन गर्ने तर पैसा नपठाउने गर्थे । अहिले भने सम्पर्क मै आएकै छैनन् ।शान्ता सानै देखि बिरामी थिइन् । बिहे गरेकै साल देखि मु‘खबाट र‘ग‘त आउँथ्यो ।क्ष‘यरोग भएको आशंकामा उनले टि‘वीको औ‘ष‘धी पनि लिइन् तर उनलाई ठीक भएन ।
पतिले आफन्तलाई फोन गरे पनि उनलाई सम्पर्क गर्न छो‘डे ।पति मगर भए पनि शान्ता शेर्पाकी छोरी हुन् । जति गरिब भएपनि आफ्नो काम आफै गर्नु पर्छ भन्ने उनलाई लाग्दथ्यो । तर पतिले सबै इमो, फेसबुक लगायत सबैतिर ब्ल क गरिदिएका रहेछन् ।त्यसपछि उनको त पतिसँग सम्पर्कै हुन छोड्यो ।
पति खोज्दै उनी काठमाण्डौं एम्बेसीमा समेत गइन् तर उनका पतिको पत्ता लागेन । तर उनका पतिसँग सम्पर्क हुनै सकेनन् । अहिले राशनको, घर भाडा, औ‘ष‘धी खाएको एक लाख भन्दा बढि ऋण भयो । उनलाई घरबेटी ले नै नि‘कालीदिएपछि उनी अहिले झन स‘मस्यामा छिन् । उनी पति आउन् र आफ्नो कुरा प्रष्ट राखुन् भन्ने चाहन्छिन् ।भिडियो
Prevआज आइतबार फेरि ह्वात्तै बड्यो सुनको मुल्य!
Nextचर्चित किक्रेटर महेन्द्रसिंह धोनी बने भिक्षु, उनको यो रुप देखेर सन्सार अचम्ममा (भिडियो हेर्नुहोस्)
विनयजंग झन् फसे अनुसन्धान प्रतिबेदनले भन्यो पाँच वर्ष कैद ! यसरी लतार्दै लग्यो प्रहरीले( पुरा भिडियो सहित )
फरार युवाको श्रीमती रुदै आइन् मिडियामा, ग र्भवती श्रीमतीको बनाए बिचल्ली (भिडियो)
रोल्पाली गायिका ज्योती मगरले फेरी गरिन् अर्को हर्कत
कुकुरले आफ्नो मालिकको मृत्यु हुने थाहा पाएपछि अन्तिम पटक अस्पतालमा पुगेर ‘गुड बाइ’ गरे संगै मालिकको पनि मृत्यु (भिडियो)